Contributions and Challenges Facing the Financial Sector in Zimbabwe
This study examines the contribution of the financial sector to economic activity over four economic policy regimes since independence in 1980.
The Nexus Between Growth, Employment and Poverty in Zimbabwe
Even before the decade-long economic crisis, the economy of Zimbabwe was already failing to absorb the high numbers of people.
Capital Account Restrictions in Zimbabwe in the Multicurrency Period
Since the introduction of the multi-currency regime (MCR) in February 2009, economic growth has returned to positive levels.
The Zimbabwean economy has maintained price stability, with annual inflation at 1.87% in June 2013, which is within targeted levels.
Building Agricultural Competitiveness in Zimbabwe
This paper attempts to assess Zimbabwe’s agricultural competitiveness, in terms of the sector’s performance, and challenges to expanding the sector and improving competitiveness.
Access to Bank Credit as a Strategy for Re-Industrialisation in Zimbabwe
The introduction of multi-currency system in the country brought about economic stabilisation, as most critical sectors of the economy registered growth.
Global growth is projected to strengthen gradually through 2013, averaging 3.5%, on the back of strong policy actions that have lowered acute crisis risks in the Euro area and the United States of America (USA).